eHarmony Oo Daahfuray Goob Ciyaaraha Lagu Sameeyo Oo Loogu Talo Galay Shaqooyinka… Srsly | Martech Zone
Goobaha shaqo raadinta waa hal dersin. Waxaa jira in badan oo iyaga ka mid ah xitaa qaar ka mid ah xitaa waxay isku dayaan inay kala soocaan iyagoo sheeganaya inay yihiin, "eHarmony" shaqooyinka. Sida laga soo xigtay Dr. Neil Clark Warren, aasaasaha eHarmony, "Iyagu ma ahan." Hadda shirkadiisu waxay leedahay shey sharci ah oo lagu caddeeyo waana hab ka caqli iyo casriyeysan intaad moodeyso.
Warren iyo kooxdiisii ​​wax soo saarku waxay bilaabeen Xirfado Sare oo ay sameeyeen eHarmony magaalada Los Angeles usbuucii hore. Shaacinta, iyagu waa macmiil PR ah Elasticity, Shirkadda aan u shaqeeyo, iyada oo la adeegsanayo Istaraatijiyadaha Astaamaha.) Madalku waxay ka qaadataa habka isugeynta guurka algorithm barnaamijkooda asalka ah waxayna ku dabaqdaa dhibaatada u dhiganta shaqada. Laakiin waxay ka taxadireen inay sharxaan inaysan ahayn shukaansi / algorithm guur algorithm oo ku xaniban goobta shaqo raadinta.
"Waxaan u adeegsanay isla falsafada khibradeena dhismaha mashiinka eHarmony oo waxaan waydiinay su'aalo isku mid ah oo kusaabsan iswaafajinta shaqada," ayuu sharaxay Steve Carter, Madaxweyne kuxigeenka Iskuwaagida eHarmony, laakiin inta badan mas'uul ka ah tikniyoolajiyadda ka dambeysa Shaqooyinka Sare. Isaga iyo kooxdiisuba waxay dhisteen algorithm gooni ah oo xogta ka qaata shaqo doon iyo xogta laga helo loo shaqeeyeyaasha suurtagalka ah ka dib marka ay la jaan qaadaan 16 arrimood oo muhiim ah, aadna u la mid ah sababaha xiriirka 29 ee ay cilmi baaristooda ugu adeegsanayaan wax soo saarka eHarmony. 16-ka arrimood waa hubaal lahaansho, laakiin waxay ku dhacayaan saddex baaldiyo waaweyn oo diiradda la saarayo: Shakhsiyadda, Dhaqanka iyo Xiriirka.
Marka si loo karkariyo, waxay abuureen adeeg iswaafajin shaqo ah, oo aan ahayn adeeg raadinta shaqo, oo ay shirkaduhu ku bixin karaan inay iska diiwaangeliyaan maadaama, aragti ahaan, ay ka caawin karto urur shaqaaleynta shaqaale ku habboon, fursad badan u leh guuleysto oo la sii joogo shirkadda muddo dheer. Taasi ma kordhin karto oo keliya wax soo saarka laakiin waxay yareyn kartaa kharashaadka layaabka leh ee shaqaaleynta dad cusub. Isweydaarsiga, sida ay yiraahdaan adduunka HR, waa qashin.
Shaqo raadiyeyaashu waxay u isticmaali karaan barta bilaash ah waxayna leedahay su'aal nooceeda shakhsiyadeed oo la filayo ee ku saabsan geeddi socodka. Halkaas, degelku wuxuu kugula talinayaa loo-shaqeeyayaasha inay ku habboonaan lahayd shakhsiyaddaada, baahiyahaaga dhaqanka, khibradaada iyo wixii la mid ah. Haddii aad waligaa shaqo qaadatay oo kaliya inaad si dhakhso leh u ogaato inaadan dhab ahaan ku habboonayn ama aadan jeclayn dhaqanka, waxaad arki kartaa faa'iidada shaqsiyeed ee wax sidan oo kale ah.
Iyo sida aad ka filan kartid khabiirka xiriirka, Warren wuxuu ka fekeray dhammaan noocyada isku xirnaanta xiisaha leh iyo tirakoobka ku saabsan sida haddii aadan ugu faraxsanayn shaqadaada, taas oo ku lug leh noloshaada shakhsi ahaaneed, xiriirradaada, caafimaadkaaga iyo waxyaabo kale oo badan. Marka, asal ahaan, Xirfadaha Sare waxay ku doodi doonaan inay ka caawin karto shirkad inay yeelato shaqaale farxad leh oo ku nool nolol farxad leh iyo yada yada.
Su'aalahayga, oo aan adiga kuu dhigo oo aan jeclaan lahaa ra'yi-celintaada faallooyinka, waa kuwan:
Cilmu-nafsiga aadanaha iyo cilaaqaadka miyuu dhab ahaantii u kari karaa hoos-u-dhigista algorithm ee sahaminta ku saleysan? Ahaanshaha dhagaystayaal ku xeel dheer cilmiga farsamada, malahayga miyaad odhan lahayd "haa" laakiin ka waran ciladda bini'aadamka ee soo gelitaanka? Markaan shaqo raadinayo, aad baan ugu qanacsanahay inaan iraahdo waxaan u maleynayaa inay shirkaddu rabto halkii aan ka heli lahaa dhab ahaan waxa aan dareemayo, ka fikiro ama aan ka aaminsanahay musharrax ahaan. In kasta oo Xirfadaha Sare looma samayn sidii resume ama goob goob raadineed, maskaxda buuxinta foomkaasi waxay noqon doontaa mid ka mid ah, “Maxaan u malaynayaa inay shaqa-doone mustaqbal doonaysaa ay i rabto?”
Shirkaduhu waxay korsadaan tiknoolajiyad wax kasta laga bilaabo suuq geynta illaa silsiladda iyo wixii ka dambeeya. Laakiin iyagu diyaar ma u yihiin inay aaminaan algorithm si ay u xushaan, ama u doortaan, musharixiinta shaqada mustaqbalka? Waa hubaal inay kafiican tahay hubinta boggooda Facebook ee sawirada biirka bong, iyo Isbarbar dhigga Xirfadaha Shaqada ma noqon doonto go'aanka shaqaalaynta ugu dambeysa ee qof walba, laakiin sida ay diyaar ugu yihiin inay maal gashadaan tikniyoolajiyaddu waa hawlgalada HR, runti?
Maxaa ku dhacaya qorayaasha la siiyay lacagta si ay u meeleeyaan musharraxiin marka shaqsiyad / dhaqan / xiriir xiriir laga yaabo inuu ka hor yimaado shaqa doonkooda?
Intee in le'eg ayuu habkan oo kale u socon karaa? Ma sameyn karnaa algorithm si aan ula mid dhigno hay'adaha macaamiisha? (Waxaan jeclaan lahaa inaan arko xogtaas. Heh.) Dhab ahaantii isla qaabku wuxuu khuseeyaa cilaaqaadka iibiyeyaasha iyo wada-hawlgalayaasha. Laakiin waxay u baahan tahay heer qiimeyn dhinac saddexaad ah oo ku saabsan ururada ku lugta leh. Immisa shirkadood ayaa si dhab ah albaabadooda ugu furi doona imtixaanka shakhsiyadda urur?
Waxaan u arkaa shaqooyin sare inay yihiin wax xiiso leh. Waxay noqon doontaa mid xiiso leh in lagu arko shaqada. Marka su’aasha dhabta ah ayaa weli taagan: Maxaad u maleyneysaa? Miyaad u adeegsan lahayd maamule shaqaale ahaan haddii aad marin u hesho? Ma u isticmaali lahayd shaqo raadsade? Faallooyinka adigaa iska leh.
Tags: algorithmseHarmonyshaqooyinka sareFarsamada HRilaha aadanahaiswaafajinta shaqadatiknoolajiyadda u dhiganta
Jason Falls waa SVP loogu talagalay Istaraatiijiyadda Dijital ah ee Elasticity, shirkad suuq geyn ku sameysa dijitaalka oo xafiisyo ku leh magaalooyinka St. Louis, Chicago iyo Louisville. Isaga oo ah qoraaga laba buug oo ku saabsan suuq geynta dijitaalka, had iyo jeer kahadal muhiim ah mowduuca iyo falanqeeye tikniyoolajiyadda bulshada. La xiriir isaga at jasonfalls inta badan shabakadaha bulshada.
Apr 11, 2016 at 11: 23 AM
Jason - ma jiraa URL goobta cusub?